China Gypsum Board Production Line mpanamboatra sy mpamatsy | Amulite
Ny tsipika famokarana birao gypsum miatrika ny taratasy miaraka amin'ny fahafaha-mitentina 2 tapitrisa Sq.m no taratasy farafahakeliny tarehin-tsambo gypsum vita amin'ny novokarina tany Shina. Nefa kely toy ny fody, manana ny taovany anatiny rehetra izy. Tafiditra ao anatin'ireo fitaovana rehetra tokony hananan'ny tsipika famokarana gypsum ary manana ny teknika tanteraka. Izy io dia manana tombony amin'ny fampiasam-bola kely kokoa, tsingerina fohy amin'ny fanamboarana, tombontsoa avy hatrany ary ny famindram-bola haingana. Ny tany angatahiny dia tsy lehibe, ka mora kokoa ny mitantana sy tsara ho an'ny tontolo iainana.
Ny tabilao gypsum dia karazana fitaovana Pro-tontolo iainana izay fantatra amin'ny fahaizany miorina. Ny akora fototra ao aminy dia ny vovoka gypsum voajanahary sy taratasy vita amin'ny pulp, aorian'ny fampidirana ny fibre vera ao anaty slurry dia hamboarina ny kalitaon'ny banga fisaka. Avy eo dia ho maina ao amin'ilay fanamainana ilay banga fisaka ary hivoaka ny kalitaon'ny birao avo lenta. Azo ampiasaina amin'ny trano isan-karazany toy ny: birao, sekoly, toeram-pivarotana, trano fandraisam-bahiny, gara, seranam-piaramanidina, toerana fikarohana siantifika, trano fisakafoanana, hopitaly, teatra sarimihetsika, gymnasium ary KTV sns.
Ny taratasy dia miatrika ny tsipika famokarana gypsum miaraka amin'ny fahaiza-manao 2 tapitrisa M2 isan-taona dia afaka mamokatra ny tsipiriany rehetra momba ny tabilao hatramin'ny hatevin'ny 18mm. Ny takelaka dia maivana amin'ny tanjaka avo.
Ny tsipika famokarana birao gypsum miatrika taratasy misy ny fahaiza-manao 2 tapitrisa M2 isan-taona no safidy tsara indrindra ho an'ny mpanjifa izay maniry hampiasa vola kely kokoa ary hahazo tombony haingana.
Tombony amin'ny birao gypsum
Ny birao gypsum miatrika ny taratasy dia fitaovana tsy azo may. Tsy hirehitra izy io; Sady tsy mamokatra setroky ny poizina raha vao misy afo.
2. Voaporofo amin'ny hamandoana
Ny birao gypsum miaro ny hamandoana dia manana fahaiza-miorina ary azo ampiasaina amin'ny efitrano fandroana.
Ny fibre vera dia ampiana amin'ireo akora vita amin'ny takelaka gypsum miatrika ny taratasy mba ho mafy orina kokoa ary azo ianteherana ary tsy mora vaky. Izy io dia fitaovana tsara ho an'ny fananganana fanoherana ny horohoron-tany ary mampihena ny vidin'ny asa fototra sy ny vatan'ny trano.
Izahay dia mandray ny rijan-teny mandroso mba hamokarana ny birao. Ny fahaiza-mitroka ny hamandoana sy ny etona dia ho eo amin'ny faritra avo indrindra.
5. Hahatonga anao hanana fiainana milamina
Ny birao gypsum miatrika ny taratasy dia karazana fitaovana fananganana manana fivoaran'ny rivotra avo lenta ary afaka manitsy ny hamandoana eny amin'ny rivotra. Maniratsira izy io ary fitaovana tsara ho an'ny rindrina.
Ny birao gypsum miatrika taratasy dia azo alaina amin'ny rindrina, volavolaina, tsofa ary lalotra. Ny hatevin'ny rindrina farany ambany dia mety ho 74mm ary afaka mamonjy habaka betsaka. Keel dia hampiasaina amin'ny fametrahana ny birao ary hanamora izany.
7. Mitafia tsara
Ny Birao Gypsum dia manana ny fahaizan'ny stable, asidra ary mahazaka alkali ary tsy mety simba. Tsy azo ravana izy noho ny hamandoana, ny sigara na ny antsony. Azo ampiasaina amin'ny fotoana lava be izy io.
8. Pro-tontolo iainana
Tsy misy fitaovana manimba na taratra ao amin'ny birao miatrika gypsum tarehin-taratasy. Azo ampiasaina amin'ny karazana trano rehetra izy io.
Rafitra fanodinana sakafo feno
Fahanoana gypsum Powder Slurry Sy Cover Cover Forming Board System
Gypsum Board manamafy ny mpampita, ny rafitra manapaka sy ny fanamainana mandeha ho azy)
Gypsum Board manamafy ny mpampita
Birao gypsum aorian'ny fanapahana fanapahana
Rafitra fanamainana ny birao gypsum
Rafitra mpampita hazo fijaliana voalohany
Birao gypsum avy ao amin'ny efitrano fanamainana
Gypsum Board Production Line Second Cross Convey System, fanapahana sisiny mandeha ho azy ary manangona vovoka
Rafitra elektrika -PLC
Teo aloha: Tsipika famokarana vovoka gypsum
Manaraka: UV Coating / Drafitra famokarana sary hosodoko
Mpanamboatra tsipika Gypsum China
Fitaovana gypsum Board
Masinina Gypsum Board
Gypsum Board Roll Forming Machine